Thailandy: Fiadiana ho An’ny Fahavelomana sy Fahaiza-mamorona Mandritra ny Tondradrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2017 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Deutsch, Español, македонски, Català, Svenska, 日本語, Ελληνικά, বাংলা, Italiano, Magyar, 繁體中文, 简体中文, English
Mihatsara ny toe-draharaha ao Thailandy satria efa misintona ny rano tondraka, saingy ny taham-pafatesana izao no efa nahatratra nihoatra ny 600, hoy i Saksith Saiyasombut:
nkehitriny efa toy ny hoe tapitra izao ny ratsy indrindra ary miadana saingy azo antoka ny fihenan'ny ranomasina any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, miverina ao Bangkok ny fahatsapàna ny fiainana andavanandro. Na izany aza, ny fijalian'ny maro any amin'ireo faritra voakasika dia mitohy, mbola misy fifandirana manaraka ireo fefiloha ary efa mihoatra ny 600 ny isan'ny maty ankehitriny.
Mahita ihany koa i Ladprao64 fa efa miverina amin'ny ara-dalàna ny fiainana any amin'ny toerana maro:
Na mbola maro aza ny olona mbola miady amin'ny trano sy toeram-piasana tondraky ny rano ao amin'ny manodidina an'i Bangkok, any avaratra kokoa sy any amin'ny faritra sasany ao amin'ny renivohitra ihany, efa miverina amin'ny laoniny ny patch kelintsika. Tany Ladprao Afovoany izahay tamin'ny Asabotsy – ny omalin'io ny tao no nivoha – ary tsy dia nanana olana loatra tamin'ny fankanesana teny. Nisy rano vitsivitsy teo akaiky ny SCB Plaza ary nampiasa ny sakeli-dalana roa ireo fiara fa raha nilaina dia azo nandehanana ireo sasany tao anatiny.
Ankoatra izay, nisy fotaka be mba hahitàna ny haavo tratran'ny rano teny ary ho lasa ratsiratsy endrika mandritra ny fotoana vitsy ilay toerana.
Ny loza voajanaharin'ny tondradrano tao Thailandy no ratsy indrindra tamin'ny dimy taona lasa raha teo amin'ny lafiny famoizana aina sy fahasimban'ny fanànana ary fotodrafitrasa. Fa nampiseho ihany koa ireo toetra mahay mamorona nanànan'ny olona rehefa niaritra ny tondradrano izy ireo ilay loza voajanahary izay nanondraka ny ankamaroan'ny faritany nandritra ny herinandro maromaro, anisan'izany ny faritr'i Bangkok.
Kaonty Tumblr iray izay manangona ireo fitaovana momba ny safodrano ireo fahaizamanao mahaliana izay noforonin'ny mponina tsotra mba hahatafavoahana velona amin'ny tondradrano ny Thai Flood Hack. Ohatra, ity ambany ity misy sambo natao tampoka vita avy amin'ny koveta plastika:
Manahy momba ny toerana fiantsonana any aminà trano tondraky ny rano? Ity ambany ity misy fiantsonana soavaly vy tsy manam-paharoa:
Ary kitapom-piara miaro ireto fiara ireto:
Ity ambany ity misy akanjo tavoahangy entina milomano ho an'ny saka:
Toa vonona amin'ireo arabe tondraka ity fiara pickup mandray roa ity:
Nanampy tamin'ny fanamboarana fitaovana izay mety hanampy hiaro aina maro mandritra ny tondradrano ihany koa ireo Oniversite. Ohatra malaza iray ny FloodDuck izay manome fampitandremana momba ny fisian'ny herinaratra ao amin'ny rano tondraka.
Mamantatra fampiasa maro mitrandraka eny ifotony izay manome torohay mahavonjy ilain'ny mponina ny Clarice Africa. Ohatra amin'izany ny tranonkala Tondraky ny rano ve ny tranoko?, ”toerana ahafahan'ny mponina ao Bangkok izay nafindra niala ny toeram-ponenany tsirairay mampiditra ny adiresy paositra sy mahita ny toe-draharaha mikasika ny tondradrano eny akaikin'ny trano fonenany.”
Ity misy tantaranà mpanavotra alika sy mpilatsaka an-tsitrapo raha nitady sy nanampy alika tafahitsoka tao amin'ny tanàna ry zareo:
Nahita alika maro tany amina trano sy garazy tsy nisy na inona na inona intsony izahay izay nihanika teo amboninà fiara nitsinkafona. Nazava ho azy fa tsy nihinan-kanina nandritra ny andro maro izy ireo. Natahotra ireo alika ireo ary niady mafy ireo mpamonjy niaraka taminay mba hisambotra azy ireo amin'ny haratony sy ny tànany.
Nahita alika kely maro tafahitsoka tao aminà fako nivangongo nitsingevana izay faly nahita anay ary tonga dia nisaoty haingana tao amin'ny sambonay, toerana nankafizan'izy ireo sakafo sy fitiavana kely. Tao anaty rano lalina teo akaiky teo ny reniny ary tena natahotra, vitanay ihany koa ny nanavotra azy tamin'ny farany.